October 28, 2021 - Channel Lover
ဟုမ္မလင်းမြို့က အလယ်တန်းပြကျောင်းဆရာမ ဒေါ်မေနှင်းအေး လုပ်ကြံခံရတဲ့ အကြောင်းရင်း
October 28, 2021 by Channel Lover
ဟုမ္မလင်းမြို့က အလယ်တန်းပြကျောင်းဆရာမ ဒေါ်မေနှင်းအေးဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ လက်နက်ကိုင် လူတစုရဲ့ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သွားတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ “ညနေ ၆ နာရီခွဲလောက်မှာ မရီးက ကျွန်တော့်အခန်းဘေးက ဝရန်တာမှာထိုင်နေတာပေါ့။ အဲဒီမှာ အိမ်စီးကားနဲ့ ခြံရှေ့ရောက်လာပြီး ခြံထဲကို လူ ၃ ယောက် ဝင်ပြီးတော့မှ သေနတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပစ်တယ်။ အိမ်ထဲရှိတဲ့လူတွေကိုလည်း လှမ်းပစ်တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်မရီးက လက်ရယ်၊ ပေါင်ရယ်၊ ရင်ဘတ်ရယ်မှန်ပြီး သေဆုံးသွားတာပေါ့လေ။” အဲဒီညနေက ဒေါ်မေနှင်းအေးကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်သတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာ မတ်ဖြစ်သူ ကိုကျော်ဝင်းစိန်က ဘီဘီစီကို ပြန်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်မေနှင်းအေးဟာ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ပါဟုတ်ကြီးကျေးရွာအလယ်တန်းကျောင်းမှာ တာဝန်ကျတဲ့ အလယ်တန်းပြဆရာမ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူ တယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ CDM လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ … Read more
ဘေးအခန်းက အသံ ကြားလို့ လင်မယားစုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်…
ဘေးအခန်းက လင်မယားစုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်… ဘေးအခန်းကလင်မယားစကားပြောသံကိုနားမထောင်ချင်လည်းကြားနေရသည်…။ “မိန်းမမင်းကုန်းပေးရမဲ့အလှည့်”“ဟာ..ဒီမှာ အရမ်းအိပ်ချင်နေတာကို“အိပ်ချင်တာ..အသာထား..ထပြီးကုန်းပေးစမ်းပါကွာ..” “သြော်..မနက်ကလည်းကျမကုန်းပေးပြီးပြီ..ခုလည်းကျမပဲ..ကုန်းပေးရဦးမှာလား..”“အေးလေမင်းပဲကုန်းပေးရမှာပေါ့..” “တောက်စ်..ဒီလိုမှန်းသိရင်..ယောင်္ကျားမယူခဲ့ပါဘူး..တော်….။ ”ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံများကြားနေရသည်…။ ရုပ်လေးပါမြင်ရရင်ပိုပီး အရသာရှိမည်- မထူးဘူး လူ့လက်တစ်ရပ်သာသာ အုတ်နံရံကို တောက်တက်လိုတွယ်ကပ်တက်ပီး အပေါ်စီးကချောင်းမည့်အကြံဖြင့် …။ လွယ်တော့မလွယ် အင်မတန်မက်မောလွန်းလို့သာ ကုတ်ကပ်တက်ရသည်… ပြုတ်ကျလျှင် မသာပေါ်နိုင်သည်..။အနည်းဆုံးတော့ ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည်။ တွေဝေနေစဉ်မှာပင် ” မိန်းမ မနက်ကလိုအရည်လည်းမထွက်ဘူး” ” ယွကျား တစ်နေတယ်” မထူးပါဘူးကွာ ခုံတေဆင့်နေရင် ကောင်းခန်းတွေလွတ်တော့မယ် …. ကိုယ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စပိုက်ဒါမန်း ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း အုတ်နံရံကို အသကုန်ကုတ်ကပ်ကာ တက်ပီးကြည့်လိုက်မိသည်။ မြင်ကွင်းက မယုံနိုင်စရာ သောက်ကျိုးနဲ ဟားးးးး “သားလေး..မေမေ့ဆီလာ…မေမေ အီအီး ကုန်းပေးမယ်..”တဲ့. (သေပီ ဆာ ခဲလေသမျှသဲရေကျရပီ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သတိလွှတ်သွားတဲ့အခိုက် အုန်းးးး … Read more
စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖို့ နောက်ဆုံးနည်းကိုပြောပြလာတဲ့ ဆရာဝန်
လက်ရှိအခြေအနေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ပြောကြပါစို့။ ဒီတော်လှန်ရေးဟာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ မနေလိုတော့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု နိုင်ငံတကာရေးရာမှာလည်း အသာရနေပါပြီ။ ပြည်တွင်းထောက်ခံမှုအနေနဲ့ဆိုလည်း အရေအတွက်ရော၊ အရည်အသွေးမှာပါ အပြတ်အသတ် သာနေပါတယ်။ ဒါ False hope ပေးနေတာ မဟုတ်သလို၊ တစ်ဖက်လူတွေကို ဆိုက်ဝါးထည့်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အရှိတရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲ ကျန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လက်နက်အင်အားပါပဲ။ နောက်ဆုံးဆိုပေမဲ့ ဒီပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့ အဓိကအချက်တွေထဲက တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အလှူခံတဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေကို ပိတ်တာမျိုးက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိတ်မှာပါပဲ။ ဒီငွေတွေဟာ ကိုယ့်ကို ပြန်သတ်မဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ … Read more
ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်မှာဖြစ်သည် (ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ အန်တီရယ်) ကားပေါ်ရောက်ရင် အိပ်တတ်တာကြောင့် အသက် (၅၀) ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက် ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကားပေါ်ရောက်ရင် အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် (၅၀) ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်မှ ယဉ်မောင်းအား ကားစတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည်။ ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်”” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ” ထိုသို့ဖြင့် ကားစီးလာရင်း အဒေါ်ကြီးမှာ အိပ်ငိုက်ပါလာတော့သည် နာရီအနဲငယ်အကြာတွင်တော့ အဒေါ်ကြီးအသံ ဟိန်းထွက်လာသည်” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပြီလားကွဲ့” ယဉ်မောင်းရော စပါယ်ယာပါ အခက်တွေ့ကုန်ကြလေသည် အုတ်ဖိုတာဆုံကို အတော်လေးကျော်လွန်သွားတာကိုး အခြားခရီးသယ်များကလည်း ဒရိုင်ဘာကို ဝိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြတော့သည် ဒရိုင်ဘာလဲ မနေသာတော့ပဲ။ ” ကဲ ကဲကျနော့အပြစ်ပါဗျာ တောင်းပန်ပါတယ် နောက်ကိုပြန်မောင်းပေးပါ့မယ် ဂျီးဒေါ်ရေ” ထို့နောက် ကားကို … Read more
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို မိုင်း ၁၀ လုံးဆွဲ၍ တိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံး (ရုပ်/သံ)
မြိုင်မြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို မိုင်း ၁၀ လုံးဆွဲ၍ တိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံး (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို ယနေ့အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မြိုင် PDFက မိုင်း ၁၀ လုံးဆွဲ၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံးကာ အများအပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်း မြိုင် PDF က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ 𝐌𝐲𝐚𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐃𝐅 မှ ဇုံ(၂) တပ်ခွဲမှုး-၃ ဗိုလ်𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬 ၊ ဇုံ(၁)ဒုခွဲမှုး-ဗိုလ်ဒူဝံ ၊ ဗိုလ်ဗျုဟာခေါင်းဆောင်သော ရဲဘော်များသည် ယနေ့အောက်တိုဘာလ ၂၈ မနက် ၉ နာရီကျော်အချိန် မြိုင်-ဗဟင်း-ခင်အေးလမ်းမပေါ်တွင် အကြမ်းဖက် စကစ စီးနင်းလာသော … Read more
“လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း”
“လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အိမ်မြှောင်ချေး အကြောင်း” အိမ်မြှောင် ချေးတစ်ခုမှာဆိုရင် ထိပ်မှာကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ အဖြူရောင်အစေ့လေးကို သိသိသာသာ မြင်ကြရမှာပါ။ အိမ်မြှောင် ချေးတုံးလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင် အောက်ဘက်မည်းနေတဲ့အပိုင်းက မစင်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်က အဖြူရောင် အစေ့လေးက ဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအပါအဝင် တော်တော်များများသတ္တဝါတွေမှာ ဆီးကို အရည်အဖြစ်နဲ့သွားပေမယ့် အိမ်မြောင်တွေကတော့ အခဲပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။ အဲ့သည်အဖြူရောင်လေးဟာ သူတို့ရဲ့ဆီးကထွက်တဲ့ ယူရစ်အက်ဆစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Crystal လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြွေတွေရဲ့ချေး ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကလည်း အိမ်မြှောင်တွေနဲ့ဆင်တူ ပါတယ်။ အိမ်မြှောင်ရဲ့ ချေးက အန္တရာယ်ရှိလားဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဆာမိုနဲလားလို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ အလွန်များပြားစွာပါဝင်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ အင်းဆက်တွေမှာ ရှိတတ်ကြတဲ့အခြားဘက်တီးရီးယားတွေလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် အိမ်မြှောင်ချေးကိုင်မိပြီးသွားရင် ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစားစားမိရင်မပါသွားအောင်ဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံ/စာ crd. Geek community myanmar 2.0 SiThuMaung … Read more
မုံရွာ တပ်ရင်း၁၆ဂိတ်ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်၊ ဂိတ်စောင့်တပ်သားတစ်ဦး သေဆုံး(ရုပ်/သံ)
မုံရွာ တပ်ရင်း၁၆ဂိတ်ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်၊ ဂိတ်စောင့်တပ်သားတစ်ဦး သေဆုံး(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈/ RNA စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မုံရွာမြို့ အောင်ချမ်းသာ တပ်ရင်း၁၆အတွင်းမှာရှိသည့် ဂိတ်စောင့်တပ်သားတစ်ဦးကို ဒီကနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီဝန်းကျင်အချိန် PDF-South Monywaနှင့် Monywa Heroes Group တို့က ပူးပေါင်း၍ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ PDF-South Monywa တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ဝန်းထဲရှိ ဂိတ်အထိ PDF-South Monywaနှင့် Monywa Heroes Group တို့မှ တရက်စပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဂိတ်စောင့်တပ်သားတစ်ဦး နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ source khitthit unicode မုံရှာ တပျရငျး၁၆ဂိတျကို ပဈခတျတိုကျခိုကျ၊ ဂိတျစောငျ့တပျသားတဈဦး သဆေုံး(ရုပျ/သံ) ရနျကုနျ၊ အောကျတိုဘာ ၂၈/ RNA စဈကိုငျးတိုငျး၊မုံရှာမွို့ အောငျခမျြးသာ တပျရငျး၁၆အတှငျးမှာရှိသညျ့ … Read more
ရန်ကုန်မှာ ကြောက်စရာ အရမ်းကောင်းနေပြီ (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန်မှာ ကြောက်စရာ အရမ်းကောင်းနေပြီ (ရုပ်သံ) ညနေ၄နာရီပဲရှိသေးတယ် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရွှေပေါက္ကံ မော်ကျွန်းထိပ်နားမှာ ဆိုင်ကယ်၊ဆွဲကြိုး၊ ပိုက်ဆံပါလုသွားတယ် ရန်ကုန်မှာကြောက်စရာအရမ်းကောင်းနေပြီ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ရမ်းကားနေကြတာ အလုခံရသူက ကျမတူလေးပါ အခုထိတရားခံမမိသေးလို့ပါ *vdကို အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ သက်သေအဖြစ်ပေးလို့ တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည် အားလုံး ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ကြပါ…။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေ ပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဆုံး ရရှိနိုင်ပါစေ…။ source su hlaing aung unicode ရနျကုနျမှာ ကွောကျစရာ အရမျးကောငျးနပွေီ (ရုပျသံ) ညနေ၎နာရီပဲရှိသေးတယျ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ ရှပေေါက်ကံ မျောကြှနျးထိပျနားမှာ ဆိုငျကယျ၊ဆှဲကွိုး၊ ပိုကျဆံပါလုသှားတယျ ရနျကုနျမှာကွောကျစရာအရမျးကောငျးနပွေီ အုပျစုဖှဲ့ပွီး ရမျးကားနကွေတာ အလုခံရသူက ကမြတူလေးပါ အခုထိတရားခံမမိသေးလို့ပါ *vdကို … Read more
“မြေပဲခင်းထဲမှာ တစ်ပင်ထဲနဲ့ ဥ (၇၀၀) ကျော်ဥတဲ့ မြေပဲပင်ကြီးကို တွေ့ရှိခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ တောင်သူဦးကြီး(ရုပ်သံ)”
“မြေပဲခင်းထဲမှာ တစ်ပင်ထဲနဲ့ ဥ (၇၀၀) ကျော်ဥတဲ့ မြေပဲပင်ကြီးကို တွေ့ရှိခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ တောင်သူဦးကြီး(ရုပ်သံ)” ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ မိုးမြေပဲပင်ဥချက်ကတော့ မယုံနိုင်စရာဘဲ တောင်သာနယ် ချောက်းခွရွာက ဦးဖိုးဌေး ၏ မြေပဲမှ တွေ့ရှိရသော မြေပဲပင်ပါ။ မြေပဲတစ်ဆံတည်းကနေပေါက်တာပါ အတောင့်၇၀၀ကျော်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ် ပုံမူရင်း ချောင်းခွရွာ U Lay Gyi အကောင့်မှပြန်လည်ကူးယူထားပါတယ် တစ်ပင်တည်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် မိုးမြေပဲတပင်ထဲနဲ့ဥပေါင်း(၇၀၀)ကျော်တောင်သာမြို့နယ်ချောက်ခွရွာပင်ပြားခေါ်(၆)လပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ် မြေပဲရကြပါစေ တောင်သူဦးကြီးတို့ရယ် ဝမ်းသာလှပါတယ် Kyaw San Lwin unicode “မွပေဲခငျးထဲမှာ တဈပငျထဲနဲ့ ဥ (၇၀၀) ကြျောဥတဲ့ မွပေဲပငျကွီးကို တှရှေိ့ခဲ့လို့ ပြျောရှငျနတေဲ့ တောငျသူဦးကွီး(ရုပျသံ)” ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ မိုးမွပေဲပငျဥခကျြကတော့ မယုံနိုငျစရာဘဲ တောငျသာနယျ ခြောကျးခှရှာက … Read more